Edge alxanka dogob - Shiinaha Langzhi Alxanka Qalabka
- Nidaamka alxanka si toos ah Guudmarka Edge-dogob waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in tollayn gaadhya iyo kama tollayn wareeg ah alxanka Mashiinka alxanka .Aabbayaashayo waa garasho kartaa alxanka gaadhya tollayn si gooni gooni ah. alxanka tollayn Wareegtada waxaa laga heli karaa marka la alxanka rullaluistemadka jeestay isticmaalo. waxqabadka kaamil steel, ahama, alxanka titanium. Waxaan anfaco TIG iyo alxanka Plasma, plasma saldhig, tig (silig feed) sida cover .Mid ka-dhanka alxanka, laba-dhinac wax taaj oo kale. ARC biyaha hoostooda sida cover sidoo kale waa shaqaynayaa sida ay technology alxanka ...
Edge-dogob nidaamka alxanka si toos ah waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in tollayn gaadhya iyo kama tollayn wareeg ah alxanka Mashiinka alxanka .Aabbayaashayo waa garasho karaa kama tollayn gaadhya alxanka si gooni gooni ah. alxanka tollayn Wareegtada waxaa laga heli karaa marka la alxanka rullaluistemadka jeestay isticmaalo. waxqabadka kaamil steel, ahama, alxanka titanium.
Characters: tayada wanaagsan alxanka, muuqaalka kaamil ah, oo tayo leh oo joogto ah, lahayo ku yar, meelaha yar haysto iyo convery workpiece haboon.
kala duwan dhererka alxanka 6000-12000mm
alxanka kala duwan dhexroor 219-3000mm
kala duwan xawaaraha alxanka 0-2000mm / min
alxanka kala duwan oo dhumucdiisuna 3-30mm (hoos 10mm, beveling lahayn)
: Previous nidaamka alxanka u eegis
H-Ray Alxanka been Qalabka